I-Sigulda City Center Holiday House - I-Airbnb
I-Sigulda City Center Holiday House
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Normunds
U-Normunds Ungumbungazi ovelele
Indlu yeholide ene-patio yangasese ephakathi nendawo yeSigulda. I-Guesthouse ikubanga lokuhamba ngezinyawo ukusuka ezindaweni ezidume kakhulu e-Sigulda. Endlini uzothola konke okudingayo ukuze wenze ukuhlala kwakho kube ntofontofo ngangokunokwenzeka.
I-Gauja National Park ingenye yezindawo ezinhle kakhulu eLatvia. Yenza ukuvakasha kwakho e-Sigulda, noma njengoba thina ma-latvian sithanda ukukubiza kanjalo – “I-Switzerland yase-Latvia” - , kujabulise nakakhulu, ngokuhlala e-Sigulda City Center Holiday House.
Iqalwe njengebhizinisi lomndeni, i-Sigulda City Center Holiday House iyindlu encane yezivakashi enamagumbi angu-2 enkabeni ye-Sigulda. Indlu inegumbi lokuphumula elibanzi elihlanganiswe nekhishi, ikamelo lokulala lesimanje elinombhede omkhulu ophindwe kabili, futhi, yiqiniso, igumbi lokugezela elilodwa. Kungenzeka ukuguqula umbhede egumbini lokuphumula embhedeni ophindwe kabili futhi. Lapha uzokwazi ukuthola yonke into oyidingayo ngenkathi uvakashele - okokusebenza kwasekhishini, okokusika, izitsha, umshini wokuwasha izitsha, isistimu yokushisisa ngogesi, i-TV, umsakazo, indawo yemoto yakho endaweni evaliwe, ne-WiFi. Ungashintsha izinga lokushisa endlini uwedwa, ukuze uzizwe ukhululekile ngangokunokwenzeka.
Ukwenza ukuvakasha kwakho kujabulise nakakhulu indlu inengadi yangasese enocingo, lapho uzokwazi ukujabulela ukudla kwasekuseni, inkomishi yekhofi / itiye noma ube nepikiniki nokushiswa yilanga. Uzokwazi ukufinyelela ku-grill, ukuze ube ne-BBQ,”. Ingadi inompheme omncane onezihlalo netafula, lapho ungachitha khona ubusuku obufudumele basehlobo ngaphandle. Kukhona i-trampoline egcekeni lethu lezingane.
Sitholakala imizuzu eyi-10 ukusuka esiteshini sesitimela kanye nesiteshi sebhasi, imakethe ye-Siguldas, lapho ekuseni uzokwazi ukuthenga imikhiqizo emisha, izitolo zokudla kanye nezinto eziningi ezithandwa izivakashi zitholakala kude.
3 amabhayisikili ayatholakala ukuze aqashwe!
4.98 · 118 okushiwo abanye
Indlu yethu yezivakashi isendaweni ethule futhi enokuthula, nokho isemaphakathi neSigulda enhle. Ukuhlala lapha uzokwazi ukujabulela ubusuku obunokuthula, kodwa ngesikhathi esifanayo uma ufuna ukuphuma futhi wenze okuthile okujabulisayo ngeke kudingeke ugibele inqwaba yamabhasi ukuze ufike enkabeni yedolobha.
Uma uzodinga noma yiluphi usizo, sizozama konke okusemandleni ethu ukukusiza. Sizokwabelana ngolwazi lwethu ngamasiko endawo kanye namathuba okubona indawo e-Sigulda. Uma kudingekile sizokusiza ukuthi ubhukhe noma yimiphi imisebenzi.
UNormunds Ungumbungazi ovelele